Madasha ay Hoggaamiyaan Shariif iyo Xasan sheikh oo si kulul uga hadashay Arinta Raysalwasaaraha +MD Farmaajo | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Madasha ay Hoggaamiyaan Shariif iyo Xasan sheikh oo si kulul uga hadashay Arinta Raysalwasaaraha +MD Farmaajo
Sep 15, 2020 - 26 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madasha Xisbiyada Qaran ee ay Hogaamiyaan Xasan Sheikh iyo Shariif Sheikh Axmed ayaa shir ay isugu yimaadeen ku soo saaray war-murtiyeed la xidhiidha xaaladda siyaasadeed ee wadanka, waxeyna si weyn dhaliil ugu soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madasha Xisbiyada Qaran waxey madaxweyne Farmaajo ku eedeyeen ku tumasho Dastuur KMG ah ee JFS, cuuryaaminta shaqooyinka Baarlamaanka, sidoo kalana uu meesha ka saaray xukuumadii shaqeyneysay.
Qoraalka Madasha oo waxyaabo badan lagu soo hadal qaaday, waxaa sidoo kale ku jirtay in madaxweynaha lagu eedeeyay inuu sameeyay Jaha-wareer siyaasadeed iyo khilaafaad dabo dheeraaday.
Waxaa intaas sii dheer in kaligii talisnimo ay u arkaan inaan muddo 50 Maalmood ka badan la magacaabin ra’isul wasaare cusub, sidoo kalana aysan dastuurka meelna uga qorneyn magacaabista kusime ra’iisul wasaare.
Madasha ayaa sidoo kale sharci darro ku tilmaamtay magacaabista sii hayaha ra’iisul wasaaraha iyo sharciyada ay ansixiso xukuumadda xil gaarsiinta.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sidoo kale soo jeedisay saddex qodob oo ay dooneyso in la fuliyo.
Halkan Hoose ka akhirso War kasoo baxay Madasha.
Hadaad xuriyo gacanta ka saarteen. Nimaan geyn Maaha in aad calaacashaan.
4 bilood ayaa u haray. Mageeyihii aad garbaha ka qabateen. Uga leexda waqtigiisa ha bashaalee.
No shaqo wasiirkii arimaha gudaha.
No shoqo wasiirkii amniga.
No hadal badan
HAWEYDA HAWIYE haa iska qayliyeeen, safurkuna horey ha u socdo..
HAAWEYDA HAWIYE dushooda waa in lagu gorgortamaa, oo helibka lagu qaybsada.
CARABTA TIDHAAHDA: (القافلة تسير والكلاب ينبح)
Micnaheedo yahay: (SAFARKU HA ISKA SOCDO, EEYDUNA HA ISKA DHAWAAQEEN)
Somalia cuqubaa ku dhacday bal dadka xukumay maskaxda ku jirta daya
Ma waxaad leedahey Hawiye asagaa Minority u xirey Dacas ka waaweyn, SNM KA RAGSAN USC.
Intey Gacantu bukilaheyd oo maalinkasto Shisheeye Biyo laga dabo wadi lahaa – JEEBKU HA BUKO oo EEDO BATUULO halagu Baashaalo.
* Haddaad Dukaankada u dhiibato Ninkale waa inaad aqbasho KHARASH, QASAARO IYO QIYAANO.
Wax sheeg sheega badan jooji. Hadii kale.@ Macalin c/ raxmaan waanadisii meesha ku koro.
Kulahaa. Dadka golaha joogo iyo axmed Somali sideey isku dhibka qabaan ayaan la yaabay saa waa ka koray qabiilka. Kkkkkkkkk.
War bal muu iska dhoho. Axmed Somali iyo intaan daarood aheyn ee golaha joogo waa isku dhib qabaan.
Hadhoow ayuu dhihi donaa. Aragtidaadii Maaha ee waad soo copy.
Maba aadan fahmin hadalkeeygii ku saabsanaa tacsida, suaasha ood fahantaa waa jawaabtii badankeed, anigu waxaa dhahay dad baa bogii tacsida wax aan loo baahneyn ku soo qoray ee doodeydu ma aheyn maxaa loo tacsiyeen waayey Kkkk.
Tan aa leedahay waxbaa la goconayaana maxaa layga haleeyey oon gocdaa? Laandheeruhu ma gocdo mana calaacalo. Hadii gocosho jirto halkanay taal oo 24/7 laga hadlayaa Daarood iyo Kablalax.
Laangaabada iyo Sheeqaasha ayaa yaabay!
Tan aad leedahay ma la hubaa inaad fiyoowdahay, adigu ma dhaqtar baa tahay? War anagaa yaab aragnay! Hadaan wax ku soo qoro halkan dee anaa mobilkan iska leh kkk.
Hada kahor waxaa kursigan hada farmaajo kufadhiya uwaashay qabiil dhan oo majeerteen ladhaho waa kusari waayeen habargidir kadaba waalatay waa kusari weyday wadankii dhamaa shisheeye qabsadey,hada waxa loo ordaa saldanad maaha,tartanku waa ninkii shisheeyaha katurjumilahaa!!!
Sorry waxaan qalday farmaajo inuu turjubaan yhy maanta taas ayaan iskasaxay
Ma waxaad leedahay muduloodkii asna jinni kursi ayaa ku dhacay. Hadeey jooji wayaana wexey marayaan. Wadadii majeerteen iyo habar gidir?
Ilaa Markii somalidu xurowday. 9 madaxweyne oo la aqoonsaday ayaa la diwaan geliyay. 4 ka mid ahi waa reerkaas mudulood. Weliba waxaa taas dheer 4 madaxweyne ee dalka soo maray muusan ku jirin nin kursiga xanjo ku noqday.
Marka. Madaama 60 sano ay 4 madaxweyne ku soo qabteen.
Hadaan xuunkooda laga tabaneyn kaligii talisnimo hagjarnimo.
Ninyahoow Maaha ayaga xukunka loo daayo?
60 4 madaxweyne inta kale inteey jireen.
Garqaad ma isyeelyeeleysaa madaxweyne dalkaan maxamed siyaad kama danbeyn
Waa nin Abu xigma ah.Reer dhanbaa u waashay kkkk
Amxaarkii biyaha la daba siday markii ay soo galeen Muqdisho.
Habar gidir,iyadna waatii u waalatay.Ilaa haatan masgaxiyan ayay u jiranyihiin.
Haatan Mutulood ayuu Jini kursi ku dhacay.
Madaxwayaal hore oo Mooryaan siyaasadeed isku badalay ayaa meesha la muuqda.
Xagee lagu arkay laba madaxwayne oo hore ,oo mucaarid isky bahaystay?
Anuu wadankaasi Rajo kama qabo.Iftiin kii taraa ee uu shaday ninka haatan ku oodan Vila somalo,dagaal xun ayaa ku socda.
In la bakhiiyo ayuu ku socdaa.
Dad u bislaaday guustaha ayaa meesha maraya.
Beesha caalamku waa gumaysi cusub.Waa qaab cusub oo aduunka loo gumaysnayo.
Dad aduunka in yarbaa fahansan meesha loo socdo.
Adoo jooga wadankaaga ayaa ciidan laga qoranayaa gudaha wadanka,lacagta aya ala siinayaa,adna roleba kuma lihid.
Mar hadiiba lagugu abuuray baahida,meelna uma socotid.
Isku soo wada duub oo waxa laysku hayaa maaha dan wadan iyo Ummadeed,waxa laysku hayaa waa dano shaqsi ah.
Aadan Cade,Cabdirashiid iyo Siyaad Barre uunbaa madaxyaal soo noqday.
Waxa kale fake.
Boqor Buurmadoowbaa quustay.
Nacamleeye Hawiyahaa tahay sida ninka wata Gedo L. Markaa kulama yaabayo oo qoraaladada dhamaan ayaa laga arki karaa sidaad isugu dhedhejisid abti, abti abti, abti Kkkk war qof walba abti waa leeyahay ee goormey noqotay Hawiyaa abti ii ah in lagu faano? Cajiib!
Cadaado magaca ah ninka wataa horey kuu sheegay.
Aan ku baro dhulka Jubaland ma taqaanid waxaad ka timid Gal-gaduud Cabudwaaq.
Jubada hoose waa lix degmo Kismaayo, Jamaame, Xagar Badhaadhe, Af-madow iyo Buulo-Gaduud.
Waxaan ka degaa Kismaayo, Badhaadhe, Xagar iyo Af-madow.
Jubada dhexe oo caasimadu tahay Bu’aale anaa ugu badan waxna layga weeydiiyaa.
Gobolka Gedo magaalada Baardheere anaa ugu badnaa kacaankii ka hor dadkii waa lasoo qixiyey xiligii kacaanka, xisaabtana waay iigu jirtaa.
Bakool sedex degmo ayaan ku leeyahay ooy ka midyihiin Yeed, iyo Ceelberde.
Hada kuuma sheegin meel kale sida Ogadenia iyo NFD waxaan ka hadlayaa waa Soomaaliya.
Adigu adoo mareexaan ah oo lasiman abtirka Absame iyo Harti oo laysku daray oo Kablalax ah ayaad aduunka ka degtaa Gobolka Gedo iyo tuulada Cabudwaaq Kkkk.
Aamus waryaa oo isgaabi markaan hadlayo Laangaabyahow laangaabku dhalay ee Ilkayar uurmidaga ah.
Dameer iyo doc ka yeerba daankaa lajibiyaa.
Taariikhdii kacaanka iyo Jaalle Siyaad beey kaaga dentay, warba madaa hayo.
Ilka yar oo idil hadii laysku daro Ogaadeeka degan inta udhaxeysa Dhoobley iyo Qoo-Qaani ayaa kabadan.
Horta xagguu ku dambeeyey Boqor Buurmadow
Soo maahan ninkii yiri CARUURTA DHADHAAB halaga CASEYSO waxey noo diideen MILGIILAYAASHA KOOFUR aka Irir Samale
– Mr BaHal maalin dhaweyd gabadheyda (hadde maahan middaad idinku dhahdaan ) oo hadda diyaarineyso A-Level ayaa si Xujo ah igu weydiisey
Aabo miyaad taqaan – Islaamka kahor iyo intaadnaan noqon SAMAALE magacii aad u taqaaneen ALLE iyo magacii La idiin yaqaaney waqtigaas
I said, we were born Somali and Islaam at the samey time.
Intey qososhey ayey dhahdey – don’t be silly, miyaadan aqoon history
waa runteeed.Gway baacsatay.sdna Hiraab iyo Mutulood ayaad dhaafi wayday.
Ilaahay,waxaa loo yaaqaanay,waaaqaa.
laakiin waxaa laynoo yaqaanay magacaanteenu way isbabadilijiree,]
Land o punt
Intaasiba waxay diwaangaleen islaamka ka hor.
Damaca macaan jeceshaan, Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed haddii la yiraah halaga faalloodo aragtida iyo damaca nimankaan! Aniga Waxaa ii soo bixi inay degdegaan, Haddana suàasha kale Waa yay ka cabsan? Waxaan tuhmaa INAY isleeyihiin; “Armay, Idinku soo gaaraan Cali Gurey iyo Cali Khaliif oo heshiis guud dhacaa, Idinkoon waxba faraha ku hayn”. ≈©≈Beenta iyo Qiyaanada ay isku soo duuduubeen, IN LA KASHIFO waxaa ku filan INLA weydiyo “Madasha Xisbiyada Qaran” ay sheegayaan MEEQA xisbi bay ka koobantahay? looma Dhamma, inta kale Waa indha sarcaad ay ugu talagaleen Wax ma garatada iyo kuwa Qabyaaladu dilatay. ≈©≈Aragtida nimankaan in la fahmo, Waxaa Kaliyah oo ku filan, MA aragteen ayyagoo ka hadla MIDNIMO Somali? Arki maysid, Ma aragteen ayyagoo leh Al-Shabaab Hala ciribtiro? arki maysid Ma aragteen ayyagoo leh Reer Norod hala doono? Arki maysid. WBT
siyasigii ka soo baxa HAG waxaa daba dhigta mid
Yahoo ay isku hayb yihiin dib u eeg wixii dhacay 20
Kii sano ee la soo dhaafay
Caydiid waxaa malin cad togtay HAG
C/qasim. waxaa madaxtoyo u diday HAG
xasan sheikh dowladisi waxa riday HAG
Xasan cali khayre hatan waxa didan HAG
Reerka mala oran karaa waa dulmanihii isdulday?
Kursigii ay lahyen waa maran yahay waxa isku
Waxaas isdiidmada aad arkeyso waa meelkasta hadba qoladii magaalada muqdisho awood kuyeelata ayaa la arkaa miucaaradkeeda,lkn isdiidadaas waa dulmigii oo meel uu kabaxo raadinaaya iyo daacadii oo meel eey kasoo gasho raadineysa
Waa jawaabta jabhad
3 Maalin oo isbdaba joog ah markii la is hor fadhiyey shirkii Muqdisho ka socdey.
Farmaajo wuxuu ka tanaasulay qodobo badan oo ka mid ahaa wixii lagu soo malmaluuqay Dhuusamareeb 3.
Waxaan maqli jirey Dhallaan qayladii waa qaboonada.Rag jilbaculus ah oo wax badan wadankan usoo taagnaa baa helay.
Laakiin waxaa laga yaabaa inuu isbadaloo oo dhaho Golaha sacabka ayaan gaynayaa waxa soo baxa marka uu arka in afka ciidda loo daray.
Bal aan ka war sugno
Dad baa waxay Ku fakarayaan in maamul goboleed xildhibaano soo xulo kkkkk adeer sheekadaa waa dhamaatay balan waxaan kuqaaday fartaag iyo rag kalee badan xargaha lagooyo xildhibaanku waa inuu noqdaa mid kuyimaada rabitaanka shacabkiisa ninkaasaa tuuladiisa wax uqaban kara
Soomaali Xukun Millatari oo kaliya ayaa isku soo celin kara qarannimadeedii…
30 sano oo domoqraaddi la goobayay waxba lagama hayo. Aan ka ahayn inay sii baabba`do.
-Waa kuwaa kuwii dalka gatay soo taagan.
-Waa kuwaa kuwii musuqooda adduunyadu la yaabtay wali hadlaya.
-Waa kuwaa kuwii nus milyan ka qof dilay 2 da aqal ka qudbaynaya.
-Waa taa guddoomiye gobol laga kari la`yahay qaado amarka dawladda dhexe.
-Waa taa gobollo dalka ka mid ah la leeyahay ciidanka dawladda ha laga qaado si ay Kenya waxa ay doonto uga samayso.
-Waxaan hubaa xaaladda ay maanta Soomaaliya ku jirto, haddii afti laga qaado shacabka xor ah oo la dhaho kee rabtaan dimoqoraaddi iyo xukun millatari, in ay 90% u codayn lahaayeen xukun millatari…
Markaan shacabka leeyahay kuma jiraan tuugada dagaalladii ku naaxay, kuwaa waaba kuwa la rabo in dalka laga xoreeyo…
Xalku waa xukun millatari iyo shisheeyaha oo dalka laga saaro…
Cabdulaahi yuusuf,ninkii biyaha u siday Ciiidankii Ethopiya ee soo galay somaliya ayaa wali lagu danaynaa.
Qaarbaa waayay biyihii oo wax kale qaaday.
wadanku wasakh ayuu gacanta u galay.Mid biyo u sida ciidanka Kenya iyo wax kale u sida.
waar meesha waxbaa ka dhacay.
Salaan kabacdi, maxaa kuu diiday in aad aragto daanyeer Farmaajo in uu biyo iyo wax kadarran u sido Ethopia iyo wadankasta oo danahiisa nijaasnimadda iyo daanyeernimada qabyaaladda uu rabbo in uu Somaliya dib ugu riddo just like, si lamid ah adeerkiis mother fucker Afweeyne uu ugu ridday?
Cadaalad, iyo in wax xun aanan la’iskaga taagerrin in the name of dowlad maseemeeyn kartaa? Misse Canshuurta iyo dhaca uu ku hayo daanyeer Bayle cawaantaan mother fuckers Hawiyaha ayaa kuu muhiim ah?